စိုင်းအောင်တင့်ကို မုန်းသလား ???? ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
စိုင်းအောင်တင့်ကို မုန်းသလား ????
Love Rain with Si Thu
သူ့ကို အားလုံးက ကြည့်မရ။ မိန်းကလေးများက ရွံ့မုန်းကြပြီး အမျိုးသမီးကြီးများကတော့ အမြင်ကတ်ကြသည်။ ယောကျာ်းလေးများ အချင်းချင်းသူနှင့်နှိုင်း၍ စနောက်ကြ လျှင် တူးတူးခါးခါး စိတ်ဆိုးတတ်ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူ့ကိုအများစုက အယုတ်တမာ၊ မုဒိမ်းကောင်၊ တဏှာကောင်ဟု သတ်မှတ်ထားေ သာကြောင့်ပင်။ ယခုပင်ကြည့်။ အဆီတဝင်းဝင်း မျက်နှာထား နှင့်သမီးအရွယ်လောက်သာရှိသည့် အမျိုးသမီးကို တစ်ကိုယ်လုံးမျိုချမတတ် အောင်နိုင်သူ အပြုံးဖြင့် ကြည့်နေပုံက တ ကယ့်မုန်းတီးချင်စရာ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ကဒ်ဟူသော အသံကြားလိုက်စဉ်မှာ တော့ သူ၏အသွင်နှင့်မျက်နှာကချက်ချင်းပင်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ပြီးတော့ သူစော်ကားရန် ကြံခဲ့သည့် မိန်းကလေးကိုပင် သူက တလေးတစား ပြန်သင်ပေးနေသေးသည်။
”သမီး ဦးကိုအားမနာနဲ့ လက်နဲ့ထိအောင်ထိုး” သူ၏ သဏ္ဌာန်လုပ်သရုပ်တူယုတ်မာမှုသရုပ်ဆောင် ကွက်အတွက်လက်တုံ့ပြန်ရမည့် မင်းသမီးဖြစ်သူ၏ ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်စေ ရန် မညှာတမ်း သူပံ့ပိုးပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအပြုအမူများကို ပိတ်ကားထက် မမြင်ရနိုင်ပါ။ သူကတော့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ဦးစိုင်းအောင် တင့်ဖြစ်သည်။
”ဦးစိုင်းကို ခိုင်နှင်းဝေပြောဖူးတယ်။ ဟိုးသူ့ အဒေါ်ခေတ်ကတည်းက လုပ်လာတဲ့ ဒီကာရိုက်တာဟာ သူ့ခေတ်ရောက်သည်အထိသာမက နောက်ကလေးတွေထိအောင် လုပ်နိုင်တယ်၊ တော်တယ် ပြောတော့ ဦးစိုင်းပြန်ပြောမိတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေရယ် ငါ့ကို အဲဒီလိုမပြောပါနဲ့ဟယ်။ ငါရှက်လွန်းလို့ပါလို့” ဟု သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေ သည့် မျက်နှာကို ဘေးလွှဲကာ ပြောပြခဲ့သည်။ သူ့အသံက ဇာတ်ကားများထဲကလို နားဝင်ခါးဖွယ် လူယုတ်မာအသံမျိုး မဟုတ်။ သူ၏မူပိုင်သရုပ် ဆောင်သကဲ့သို့ ရိသဲ့သဲ့လည်း မ ဟုတ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူပီပီ သူ့စကားက ချိုသာသည်။ သူ့အသွင်ကယဉ်ကျေးသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ ”ဦးစိုင်းက ဒီကာရိုက် တာတွေ မှာ လူတွေမုန်းမှာ ရော လူတွေရွံမှာရောသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်က ဦးစိုင်းမှာတော့ အဲဒီလိုယုတ်မာတဲ့အသည်းနှလုံး မရှိ ဘူး”ဟု ဦးစိုင်းအောင်တင့်က ပြောသည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းမျိုးနွယ်ဝင် မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားခဲ့သည့် ဦးစိုင်းအောင်တင့်သည် အသက် ၆၁ နှစ်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်ရှမ်းတိုင်း ရင်းသား တစ် ဦးဖြစ် တဲ့အတွက် ရှမ်းဓလေ့ရိုးရာတွေ၊ ရှမ်းစကားတွေကို ချစ် ပြီး မြတ်နိုးတယ်”ဟု သူပြောစဉ်တွင် သူ့မျက်နှာဝယ် တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးသားဖြူစင်မှု အမှတ် အသားက အ တိုင်းသား ပေါ်နေသည်။ စိုင်းအောင်တင့်သည် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် တွင်အနုပညာလောကထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ပရိ သတ်များမုန်းသည့် လူယုတ်မာတစ်ဦးအသွင် ဇာတ် ရုပ်ကို အသက် ၂၁ -၂၂ အရွယ်ဝန်းကျင်တွင် စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ယခုချိန်ထိ ရိုက်ကူးနေဆဲ။
”ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဖြစ်ချင်တာတွေ အများ ကြီးပေါ့။ တကယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီအနု ပညာကို ရွေးချယ်ဖြစ်လိုက်တယ်”ဟု ဦးစိုင်းက ပြောသည်။ ဖန်သားပြင် ဝယ် ယုတ်မာကောက်ကျစ်သည့် စရိုက်ကိုပေါ်လွင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အတတ်ပညာရှိသည့် အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူခွင့် ရသော် လည်း အများ၏ချစ် ခြင်းမေတ္တာကိုတော့ မရရှိဟု သူက ညှိုးငယ်စွာပြောသည်။ ဝါသနာနှင့် သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ အတွက် ကောင်းသည် ဆိုးသည်၊ မေတ္တာရှိသည် မရှိ သည် တို့ကို မတွေးအား၊ ဝါသနာပေါ်ထုဆစ်ကာ နှစ်ပေါင်း ၃၉ နှစ်တိုင်တိုင် ပရိသတ်များစွာ၏အမုန်းကို ရင်ခွင်ပိုက်ရင်း အနုပညာလမ်းကို သစ္စာရှိရှိလျှောက် လှမ်း လာ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ရှက်လည်းရှက်တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေက ပရိသတ်အချစ်ခံရဖို့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ သူတို့မုန်းတာမဆန်းဘူးဆိုပြီး တွေးခဲ့ဖူးတယ်” ဟု ဦးစိုင်းကသိမ်ငယ်ရှက် ရွံ့နေသကဲ့သို့ တိုးတိုးညှင်းညှင်း ပြောပါသည်။ ”တစ်ခါတလေ အားငယ်မိတာပေါ့။ လူများကြားသွားရင် မလိုတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ နာဘူးကောင် တဏှာကောင်ဆိုပြီး အ ထင်သေးတော့ ပိုပြီး စိတ်အားငယ်မိတယ်” ဟု သူဆိုတော့ အမှန်တရား ဖြစ်နေသည်မို့ မည်သို့နှစ်သိမ့်ရမည်မသိ။ ဇာတ်ကားတစ်ကားတွင် ပရိသတ်အများစု သဘော ကျ တတ်သည်က မင်းသား၊ မင်းသမီးများ သာ။ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်မှ အားဖြည့်ပေးဆပ် နေကြသည့် အမေ့လျော့ခံ၊ အပယ်ခံဇာတ်ပို့များစွာ ရှိသော်လည်း လူကြမ်း များနှင့် သူ့လိုဇာတ်ပို့များအတွက်တော့ ပရိသတ်၏အမုန်းကို အပိုဆာဒါး ဆုလာဘ်အဖြစ် ရကြသည်။ သူက ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ‘ဖွေး’ဇာတ်ကား၌ ဇင် မာဦးနှင့်အတူ သရုပ်ေ ဆာင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကား သည်သူ့ဘဝအတွင် အမှတ်တရအရှိဆုံးဇာတ်ကား ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြခဲ့သည်။
သူ့ကို မကြိုက်မနှစ်သက်သည့် ဇင်မာဦးကို မရရအောင်ယူပြီး ဇနီးမယားဖြစ်လာသည့်အခါ နှိပ် စက်နည်းပေါင်းစုံဖြင့် နှိပ်စက်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင် ပီပြင်မှု အ တွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကတွင် ပရိသတ် အမုန်းဆုံးဘွဲ့ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ”လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂ဝလောက်က ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကိုယ့် ကားတင်လို့သွားကြည့်တာ ကိုယ့် ရုပ်ပေါ် လာတာနဲ့ ပရိသတ်တွေ ဆဲလိုက်ကြတာ ရစရာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်။ ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင် ချက်တွေ ပီပြင်လို့ပါ”ဟု သူ့အနုပညာနှင့် ပတ်သက်ပြီး တန်ဖိုးထားပြောပြခဲ့သည်။ရုပ်ရှင်ထဲတွင်တော့ စိုင်းအောင်တင့်ဆိုသည်မှာ သင်္ဘောသားလည်း ဟုတ်သည်။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးကြီး တစ်ဦးလည်း ဖြစ် သည်။ စီး ပွားရေးများစွာကိုလုပ်ကိုင်ပြီး စီးပွားရေးလောကမှ ငွေကြေးချမ်း သာသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့ပြင်ပတွင်တော့ စိုင်းအောင်တင့်သည် ဘဝ သ မားဖြစ် သည်။ ပျော်စရာကောင်းသည့် မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဘုရားတရားကို ကိုင်းရိုင်းပြီး သာမန်အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။
”မကောင်းတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကို လုပ်လွန်းလို့ ကံကြီးထိုက်မှာစိုးလို့ဘုရားတရားကို အမြဲလုပ်တယ်။ တရားလည်းအမြဲထိုင်ဖြစ်တယ်”ဟု သူ့အနုပညာ၊ ပရိသတ်အမုန်းတရား များကြား သူယုံကြည်ရာကို ဦးစိုင်း အောင်တင့်က ပြောသည်။ သူရွေးချယ်ခဲ့သည့် အနုပညာဇာတ်ရုပ်အတွက် သူစိတ်ထိခိုက်ရတတ်သော်လည်း သူ့အ တွက် အ ကောင်း ဆုံးပျော်ရွှင်ဖွယ် လက်ဆောင်တစ်ခုလည်း ရှိပါသေးသည်။ ထိုအရာကတော့ မိသားစုဘဝ ဖြစ်သည်။ စိုင်းအောင်တင့်သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ် တော် လှန်ရေးေ န့ တွင် ဒွေး မျက်မှန်၏ မြေးဖြစ်သူ ဒေါ်မြဉ္ဇူဒွေး နှင့်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသုံးဦးထွန်းကားခဲ့သည်။
”ဦးအမျိုးသမီးနဲ့က တကယ့်ရန်သူတွေ။ တွေ့ လိုက်တာနဲ့မျက်နှာကြော မတည့်ကြဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်တဲ့နှစ်မှာပဲ အကြင်လင်မယား ဖြစ်သွားကြတယ်”ဟု သူ့ဖူး စာ ရွာလည်ပုံကို သူက ပြုံးပြုံးရွှင် ရွှင်ဖြင့် ဖောက်သည်ချပြသည်။ သူ့ဇာတ်ရုပ် သူ့အနုပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇနီးမယားဖြစ်သူက ပါဝင်ပတ်သက်ကဲ့ရဲ့ အပြစ်တင်ခြင်း တစ် ခါမှ မရှိခဲ့သည်ကိုလည်း ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပြောပြ ခဲ့သည်။ ”သူက ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိတယ်။ ဦးရှုတင်တွေ ကို မလိုက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဦးဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပတ် သက်ပြီး သူ က ကောင်း ၏ ဆိုး၏မဝေဖန်သလို မလုပ်နဲ့လို့လည်း သူတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဖူးဘူး”ဟု ပြောသည်။
အနုပညာသမား တစ်ဦးကို နားလည်ပေးနိုင်ရန် ခက်တတ်သော လောကသဘောတွင် သူ့ဇနီး၏နား လည်မှုနှင့် ယုံကြည်သိတတ်ပေးမှုက သူ့အတွက် အဖိုးတန်ရ တနာ ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ သူ့ အနုပညာ ပြောက်မြောက်မှုကြောင့် ပရိသတ်များ၏ အမုန်းကိုသာ ပြန်ရသော်လည်း ဇနီးနှင့်သားသုံးဦး၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ သူ့ပင် ကိုစိတ်နှလုံးသား အတွက် လောကထံမှ အလျော်အစားပြန်ရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူများသားသမီးဇနီးမယားကို ကြာ ကူလီလုပ် ဖျက်ဆီးသည့် ဇာတ် ရုပ်နှင့်ေ အာင်မြင်သည့် လူယုတ်မာကြီးဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းအောင်တင့်အတွက်လည်း ထိုအရာနှင့်ပင် အသက်ဆက်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါမည်။
”ဒီဇာတ်ရုပ်ကို လုပ်လာတာ ပရိသတ်တွေ မုန်း ကြတယ်။ အဲဒီတော့ အမျိုးမျိုးကျိန်ဆဲကြတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ သားပဲသုံးယောက်မွေးပြီး အခုဆို မြေးလေးယောက်တောင်ရပြီ။ ဒါတွေက စေတနာမှန်ကန်လို့ပါ” ဟု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ သက်ဝင်ယုံကြည်ထား သည့် တရားတော်အတိုင်း သူဖြေပြောသည်။ ကင်မရာရှေ့တွင်တော့သူက လူယုတ် မာတစ်ဦး။ ပိတ်ကားထက်တွင်လည်း သူက အော့နှလုံးနာဖွယ် လူဆိုး။ ထို့ကြောင့်ပင် ပရိသတ်များက မုန်းကြသလို သူ့ကိုသတိတရအားပေးနေ သူဟူ၍ လည်းရှိ မည် မ ထင်။ သို့သော် ထိုလူယုတ်မာဘွဲ့ရဇာတ်ပို့တစ်ဦး၏ နေ့စဉ်ဘဝမှတ်တမ်းတွင်တော့ ပရိသတ်များက ရှေ့ဆုံးတန်းမှ ရှိနေသည်ကို သိကြမည်မဟုတ်ပါ။
”ဘာအလှူပဲလုပ်လုပ်၊ ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ အလှူဟာ ကျွန်တော့်ပရိသတ်တွေအလှူနဲ့ အတူတူပါပဲ ”ဟု ဦးစိုင်းအောင်တင့်က သူအလှူလုပ်ဖြစ်တိုင်း ပရိသတ်၏အလှူဟု ရည်စူး လှူဒါန်းတတ်သည့် ဓလေ့ကို ထုတ်ဖော်ပြောသည်။ ဝမ်းရေးရပ်တည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးသည့်အခါမှာတော့ ”အရင်ကတော့ ဇာတ်ကားတစ်ကား စာနဲ့မိ သားစု ဖူဖူလုံလုံရှိနေပေမယ့် အခုက ကျွန်တော့် ဝင်ငွေက အရင်လောက်မဖူလုံတော့ပါဘူး။ သားတွေ ကတော့ မိဘကိုလိုလေသေးမရှိထားပါတယ်” ဟု သားများ၏ မိ ဘကျေး ဇူးသိတတ်ခြင်းဖြင့် တပြန် တလှည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြသည့် အလိမ္မာတရားကို ဂုဏ်ယူပီတိဖြစ်နေကြောင်း သိသာသည့်အပြုံးနှင့် ဖြေပါသည်။
”ပရိသတ်တွေကို တစ်ခုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုတစ်ဖက်ကိုပဲဆွဲပြီး အတုမယူကြပါနဲ့။ ဥပမာ ကျွန်တော့်လို မုဒိမ်းကောင်က ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ ဘာဖြစ်သွားလဲ။ ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုခံရတယ်။ ဒါကိုသိစေချင်တယ်။ ပရိသတ်တွေအတုယူ မမှားစေချင်ဘူး” ဟု အားငယ်ရိပ်နှင့်ပင် ပရိသတ်များအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဖြင့် သတိပေးသည်။ ဤသည်ကပင် သူ့ကိုမုန်း၍ သူက ချစ်သော ပရိသတ်များအတွက် လူကြမ်းတစ်ဦး၏မေတ္တာဟု ဆိုနိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ရိုက်ကွင်းပြန်စမည်ဟု ဒါရိုက်တာက အသံပြုတော့ သူသက်ပြင်းချရင်း အာရုံသွင်းသည့်ဟန်ဖြင့် မျက်နှာကိုပြောင်းလိုက်သည်။ နူးညံ့ယဉ်ကျေးသော ဦးစိုင်းအောင်တင့်မှသည် ချက်ချင်းပင် အဆီတဝင်းဝင်းမျက်နှာ၊ ရိသဲ့သဲ့အပြုံးဖြင့် မင်းသမီးအနားသို့ထိကပါးရိကပါး ကပ်သွားသည်။
ဤအခန်း ပိတ်ကားထက်သို့ရောက်လာသောအခါ ပရိသတ်များကသူ့ကိုမုန်းကြလေဦးမည်။ သူ့ကိုဆဲကြ၊ ရွံရှာကြပါလိမ့်ဦးမည်။ ထိုအရာသည်ပင် သူ၏ အောင်မြင်မှု၊ သူ့ အနုပညာ၏ သိမ်းပိုက်ထားနိုင် မှုပင် ဖြစ်၍ သူကတော့ စိတ်မကောင်းခြင်းတစ်ဝက်၊ ဂုဏ်ယူခြင်းတစ်ဝက်ဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်နေဦး မည်ကတော့ သေချာပါသည်။ ဦး စိုင်းအောင်တင့် စိတ်ထိခိုက်စွာ ရင်ဖွင့်သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ဖတ်ပြီးသောအခါ ခေါင်းစီး ပေးထားသည့်မေးခွန်းကို ဖြေကြည့်စေချင်ပါသည်။ ”တစ်ခါကပေါ့ ၅၁ ကားပေါ်မှာ။ အရှေ့မှာ ထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးက လှမ်းပြုံးပြလို့ ငါ့ကိုပြုံးပြတာပဲ။ ပြန်မပြုံးပြရင်ငါရိုင်းရာကျမယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြုံးပြတော့ ဘာပြန်ပြောလဲဆို ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း ပဲ နှာဘူး ကောင်ကြီးတဲ့။ ရင်ထဲ တော်တော်မကောင်းဖြစ်မိ တယ်” သင်ကော စိုင်းအောင်တင့်ကိုမုန်းပါသလား။
Credit - ထူးထူး ( Popular Journal